Mareykanka oo ka walaacsan xaaladda Soomaaliya | KEYDMEDIA ONLINE
Mareykanka oo ka walaacsan xaaladda Soomaaliya
Khilaafka sii kordhaya ee Farmaajo iyo Rooble ayaa dhalinaya walwal laga qabo qabsoomidda doorashooyinka dalka, War qoraal ah oo ka soo baxay Mareykanka ayaa lagu sheegay inay muhiim tahay in diiradda la saaro sidii loo wajihi lahaa arrimaha doorashooyinka dalka.
MUQDISHO, Soomaaliya- Dowladda Mareykanka ayaa war kasoo saartay xaaladda siyaasadeed ee uu dalku ku jiro, gaar ahaan is fahan waaga ka dhaxeeya Madaxweynaha mddo xileedkiisu dhammaaday ee Farmajo iyo Ra’iisul wasaare Rooble, kaas oo salka ku haya Kiiska Ikraan Tahliil.
War qoraal ah oo ka soo baxay Mareykanka ayaa lagu sheegay inay muhiim tahay in diiradda la saaro sidii loo wajihi lahaa arimaha doorashooyinka dalka, loona soo dooran lahaa xildhibaanada labada Aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo aan doorashadoodu ku sugan sidii loogu talo galay.
Sii socoshada khilaafkaan ayay lagu tilmaamay mid wiiqi kara awoodda dowladnimada Soomaaliya, ayna ka faa’iideysan karaan kooxaha Al-Shabaab iyo Daacish oo ka dagaallama Soomaaliya.
Mareykanka ayaa ugu baaqay Farmaajo iyo Rooble inay si nabad ah ku xaliyaan kala fekir duwanaanshahooda, ayna si buuxda diiradda u saaraan dhammeynta doorashada Soomaaliya, iyadoo aan dib u dhac kale jirin.
‘‘Doorashooyinku waxay muhiim u yihiin amniga dalka, degenaanshaha iyo barwaaqada muddada dheer ee Soomaaliya”ayaa lagu yiri warka kasoo baxay Xafiiska dowladda Mareykanka ee Afrika.
Walaaca ugu badan ee laga qabo khilaafka labada masuul ayaa ah, in uu dib u dhac ku keeno hannaanka doorashooyinka dalka, taas oo halis gelin karta amniga guud ee dalka.
Si kastaba, Farmaajo iyo Kooxdiisa ayaan u muuqan kuwo diyaar u ah inay dalka ka hirgeliyaan doorasho xur iyo xalaal ah, madama laga la'ahay oo ay is hortaag ku sameynayaan caddaalad u helidda Ikraan Tahliil, taas oo lagu tuhunsan yahay Fahad Yaasiin inuu ku lug leeyahay kiiskeeda.